Inona no dikan'ny Rafitra SIL Signaling? - RayHaber | raillynews
HomeRailwayInona no dikan'ny Rafitra SIL Signaling?
Inona no dikan'ny Rafitra SIL Signaling?
14 / 01 / 2020 Railway, ANKAPOBENY, Taratasy fampidirana
Inona no rafitra fanamafisam-by
Ny rafitra famantarana dia ireo rafitra izay manome olan-tsolika fiarovana izay ilaina amin'ny rafitry ny lalamby toy ny Tram (SIL2-3), Light Metro ary Metro (SIL4) amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ireo fomba mifandraika amin'ny fomba tena azo antoka sy azo antoka. Ireo rafitra ireo dia manolotra tombony ara-teknika, fitantanana ary ny vidiny ary koa ny filaminana.
Na dia tsy dia mahazatra loatra aza ny fampiasana ireo rafitry ny gara eto amin'ny firenentsika ka hatramin'ny 90 ans dia hitanay fa ny volavolan-dalamby dia maniry kokoa hamaha ny fitomboan'ny olana fifamoivoizana. Andao hanohy ny lahatsoratra isika amin'ny alàlan'ny manazava ny fotokevitra fototra momba ny rafitry ny lalamby.
SIL (haavon'ny fitoniana fiarovana)
Ny fanamarinana SIL dia manondro ny fahatokisana ny rafitra. Ny haavon'ny SIL dia ambara amin'ny ambaratonga 4 fototra, ary rehefa mitombo ny haavon'ny SIL, mitombo ny haavon'ny fiarovana miaraka amin'ny fahasarotan'ny rafitra hampihenana ny loza.
SIF (Fitaovana Fitaovana fiarovana)
Ny fiasa lehibe SIF eto dia ny fanaingoana sy ny fisorohana ny loza mety hitranga mandritra ny dingana iray. Ny fiasan'ny SIF rehetra dia mandrafitra ny rafitra SIS. SIS no rafitra fanaraha-maso mifehy ny rafitra rehetra ary mampahatezitra ny rafitra ao anatin'ny toe-javatra mampidi-doza.
Ny teny hoe "Functional Safety ise dia manondro ny fampihenana ny risika amin'ny haavony azo ekena amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny asan'ny SIF rehetra ao anaty rafitra.
Fijanonana fiaran-dalamby mandeha ho azy (ATS)
Mba hahazoana antoka ny fitaterana lamasinina azo antoka sy mahomby amin'ny asan'ny lalamby, namboarina ny rafitra fanaraha-mason'ny fiaran-dalamby ary ny sasany amin'izy ireo dia fiatoana fiaran-dalamby mandeha amin'ny fiaran-dalamby, (ATP) fiarovana fiarandalamby lalamby, (ATC).
Ny rafitra ATS dia rafitra fiarovana izay ahafahan'ny fijanonan'ny lamasinina amin'ny alàlan'ny fifehezana ny hafainganam-pandeha izay misy ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny famantarana elektrika ary mampitandrina ny mpamily koa izany raha ilaina.
Ny rafi-pitaterana ATS dia mifehy ny hafainganam-pandehan'ny fiaran-dalamby miaraka amin'ny fampahalalana amin'ny fitaovana eny an-tsambo amin'ny alàlan'ny magnetika napetraka eny an-dalana sy ny fambara eo akaikiny.
Fiarovana mandeha amin'ny lalamby mandeha ho azy (ATP)
Ny rafitra ATP dia rafitra fiarovana izay miditra amin'ny teboka tsy misy fahatongavan'ilay mpamily amin'ny hafainganana ilaina na ajanony ny fiaran-dalamby mifanaraka amin'ny fampahalalana azo avy amin'ny rafitry ny ATS.
Fanaraha-maso ny fiaran-dalamby otomatis (ATC)
Na dia mitovy amin'ny rafitra ATS aza, dia amboariny ny hafainganam-pandehan'ny lamasinina arakaraka ny toeran'ny lamasinina ao aoriana sy aoriana. Tsy toy ny rafitra ATS, ny varavarana misokatra / mihidy sy ny sisa. ny dingan'ny fiarovana dia tantanan'ny ATC ihany koa.
Tamin'ny taona voalohan'ny rafitry ny lalamby, tsy nisy fepetra fiarovana natao noho ny hafainganam-pandeha ambany sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Amiyane, injeniera momba ny fiarovana. Na dia notsapaina aza ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fomba elanelan'ny fotoana miaraka amin'ireo manampahefana pointer miaraka amin'ireo lozam-pifamoivoizana, nanomboka natolotry ny fomba elanelana lavitra sy ny rafitra fanaovana sonia miaraka amin'ny fitomboan'ny habetsaky ny fifamoivoizana amin'ny dingana manaraka ity.
Raha fintinina, ny fomba elanelam-potoana dia nampiasaina tamin'ny taona voalohany tao amin'ny rafitry ny lalamby, ary ny fomba elanelan'ny elanelan'ny elanelan'ny elanelan'ny elanelan'ny elanelan'ny elanelan'ny elanelan-tany Androany ny fampiasana rafitra fanamafisana dia nahatonga ny fiara nitondra fiara tsy misy mpandeha.
rafitra fiarovana fiarandalamby
Ny rafitra fisoratana anarana dia azo zahana amin'ny fizarana 2 toy ny Field Equipments (Rail Circuits, Auto Shears, Signal Light, Fitaovana serasera misy fiaran-dalamby) ary ny rindrambaiko afovoany ary fifandraisana.
Fiaran-dalamby (fitadiavana lamasinina); Misy karazany 4 ny fiaran-dalamby algédiated algéric, sakodrano voakan-jotra Coded, faritra misy fiaran-dalamby Axle Counti ary misy fiatra mifindra mivezivezy.
Ao amin'ny circuit Circuit Algebraic Isolated, raha misy refesina fiverenana arakaraka ny volavolan-talenta ampiharina avy amin'ny faritra mitoka-monina, tsy misy fiaran-dalamby ao amin'ny faritry ny fiaran-dalamby ary raha tsy misy fihenam-bolo miverina dia misy lamasinina. Azo heverina fa misy fiaran-dalamby eto raha sendra misy tsy fahombiazana.
Ny Coded Rail Circuits dia mampiasa ny onjam-peo, ary ny fiovana amin'ny famantarana dia midika fa misy lamasinina amin'ny lalana. Tena ilaina ny fampiasana ity rafitra ity amin'ny toerana fohy sy tsy misy fahatapahana raha resaka fiarovana sy ny vidiny.
Rail circuit misy Axle Counters dia rafitra manome fiarovana amin'ny alàlan'ny fijerena ny toerana misy ny lamasinina amin'ny fanisana ny famaky miditra sy miala amin'ny lalamby. Ny fampiasana azy ireo eto amin'izao tontolo izao dia mihamitombo haingana.
Mivezivezy ny fiaran-dalamby mivezivezy dia mampiasa barazy virtoana izay miovaova ny halehiben'ny fiaran-dalamby, fijanonan'ny halaviran-jiro, herin'aratra ary curge miendrika faritra.
Fampiasana rafitra famantarana
Ao amin'ny faritra lemaka sy hita maso dia ampiasaina ny fitaovam-pandaharana mijery, raha any amin'ny faritra hety sy zorony tonta, ny rafitra interlocking dia ampiasaina hanapahana ny fidirana sy ny fivoahan'ny fiaran-dalamby mankany amin'ny kodiarana mifanandrify. Ny rafitra interlocking dia ny rafitra izay manidy lalamby ao anaty lalamby izay tadiavin'ny lamasinina hiditra sy manakana ny fiaran-dalamby hiditra.
Miaraka amin'ny fampiasana Fully Automatic Driverless Systems, dia mihena ny herin'olombelona izay lehibe indrindra amin'ny lozam-pifamoivoizana. Amin'ireo rafitra ireo, ny loza dia azo sakanana amin'ny alàlan'ny fijerena fiaran-dalamby haingana, raha toa kosa ny elanelana mpandeha dia nohafohezina amin'ny alàlan'ny fitaterana elanelana misy ny fiaran-dalamby sy ny vokatra vokarina, miaraka amina haingam-pandeha ambony. Ireo rafitra ireo koa dia mahazo tombony amin'ny vidiny fikojakojana ambany.
Ankehitriny, fiantsonan-dàlambe sy lalamby voaorina matetika no mampiasa famandrihana torolàlana mitam-basy tsy manara-penitra, Fisandratana mijanona ho an'ny lozisialy ary rafitra fifindrana mandeha ho azy.
Fiaraha-mihetsika manual block
Amin'ny ankapobeny 10 min. Ao amin'ity rafitra ity, izay ampiasaina amin'ny halavirana ambany, ny làlan'ny lamasinina misy 10 minitra. Azo antoka ihany koa ny hamita. Amin'izao fotoana izao dia mety hiteraka lozam-pifamoivoizana raha ny tratran'ny injeniera no nandehanana lavitra an'io dia lavitra io. Amin'izao fotoana izao, tokony hampiasa ny Rafitra fampahalalana mekanika (DIS) sy Rafitra fanaraha-mason'ny fiara.
Fijanonana fanamorana mandeha ho azy
Na dia eo amin'ny 20% eo ho eo aza no lafo kokoa noho ny rafi-pitaterana famaritana voalaza etsy ambony, azo atao ny mampiasa tsara ny tsipika miaraka amin'ny fametrahana mandeha ho azy ny fiaran-dalamby sy ny angovo. Satria arakaraka ny famaritana ny elanelana misy ny block dia ny 2 min ny fiaran-dalamby ao dia XNUMX min. Azo ampiasaina amin'ny faritra misy azy io.
Amin'ity rafitra ity, ny rafitra interlocking dia manapa-kevitra fa haingana ny halehan'ny lamasinina ary hahatsapa ny toeran'ny lamasinina ary milaza ny fiaran-dalamby amin'ny toerana tokony hijanonana.
Fihetsika fanosotra mandeha ho azy
Araka ny voalaza etsy ambony, ny elanelan'ny fiaran-dalamby rehetra dia atao kajy sy mifindra amin'ny lamasinina arakaraka ny hafaingan'ny lamasinina, ny herin'aratra ary ny toetry ny lalana. Ny toerana misy ny fiaran-dalamby rehetra dia voahidy mitokana ary ny hafainganam-pandeha isaky ny fiaran-dalamby dia mitokana misaraka. Noho ny haavon'ny fiarovana, ny fanomezana famantarana dia omena malalaka amin'ny alàlan'ny serivisy fifandraisana roa.
Inona ny Smart Stop System?
Inona no anton'ny fanaraha-maso elektronika?
Ny toeram-pisakafoanana Bozdag dia manenika
Tetikasa Tram manomboka amin'ny fanombohana mazava
Fitaovana fitaterana tany Izmir Famaranana
Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Tender Famerenana
Tetikasan-dàlan'i Trenaly Antalya-Kayseri
Lalana Kükürtlü Sil
Famahana ny tetikasan'ny tariby Kartepe
Circuits algebraic algebra
Fiaran-dalamby misy mpifaninana Axle
Rafitra famantarana famantarana SIL
Inona no dikan'ny Rafitra SIL signal
Inona ny rafi-pitaterana Railway
Codeed Rail circuit
Machinist Information Systems
Oloana mandeha ho azy
rafitra fiantohana fiara fitaterana
Rafitra fanaraha-maso mandeha lamasinina
Fiarovana amin'ny fiaran-dalamby
Rafitra feno fiarakodia tsy misy tomika
Fitaovana fampiasa amin'ny fiaran-dalamby
Ort Metropolitan Ordu Mamboambo